FIFIDIANANA BIRAON’NY OJM : Voahaja tanteraka ny lalàna, misy manafangaro resaka politika – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 7:29
Ny Tale Jeneralin'ny Serasera.
Accueil/Politika/FIFIDIANANA BIRAON’NY OJM : Voahaja tanteraka ny lalàna, misy manafangaro resaka politika
FIFIDIANANA BIRAON’NY OJM : Voahaja tanteraka ny lalàna, misy manafangaro resaka politika
Ara-dalàna ve ny firosoana amin’ny fifidianana izay birao vaovao handrafitra ny Holafitry ny Mpanao Gazety sa tsia ? Mbola adihevitra mitana ny sain’ny mpanara-baovao ankehitriny ny mahakasika izany. Omaly, nisy fifanatrehana teo amin’ny Tale Jeneralin’ny Serasera, Fetra Rakotondrasoava, sy ny Sekretera jeneralin’ny Holafitry ny Mpanao Gazety teo aloha, Miary Rasolofoarijaona izay niresaka indrindra mahakasika ity lohahevitra ity.
Lucien R. il y a 1 semaine
Manaraka izay voalazan’ny lalàna 2020-006 sy ny didim-panjakana laharana faha 2021-307 izay mifehy ny OJM, eo koa ny didim-pitondrana izay mamaritra ny antsipiriany amin’ny fiatrehana ny fifidianana, ny fifidianana izay ho birao vaovaon’ny Holafitry ny Mpanao Gazety, araka ny fanazavana nentin’ny Tale Jeneralin’ny Serasera, Fetra Rakotondrasoava. Manohitra izany anefa ireo vondrona mpanao gazety vitsivitsy izay milaza marindrano fa tsy ara-dalàna ity fifidianana ity satria misy pitsopitsony araka ny lalàna tsy voahaja tamin’ny fikarakarana azy. Anisan’ny navoitran’ny Sekretera Jeneralin’ny OJM omaly, nandritra ny adihevitra tao amin’ny TVM, ny mahakasika ilay « disposition transitoire » izay nambarany fa nasian’ny Minisitera fanovana raha mitaha tamin’ilay lalàna 2016-029. Fanambarana izay nodisoan’ny Tale Jeneralin’ny Serasera avy hatrany satria tsy nisy fanovana nentin’ny Minisitera mihitsy tao amin’ity « Disposition Transitoire » ity. Araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha 203 dia manao fampandehanan-draharaha andavanandro ny Biraon’ny OJM, rehefa tapitra ny fepotoam-piasana.
Fananganana ny Vaomiera itambarana isasahana
Ankoatra io, mbola mampipetraka ny adihevitra hatrany koa ny fomba nijoroan’ny Vaomiera itambarana isasahana nikarakara ny fananganana ny lisitr’ireo mpanao gazety matihanina tokony hisitraka ny karatra sy hanan-jo hifidy ny biraon’ny OJM. Isan’ny hanenjehan’ireo andiana mpanao gazety mpanohitra ny fifidianana ny hoe nokononkononin’ny Minisitera manokana tany ny fananganana ireo mandrafitra ny Vaomiera. Raha tsiahivina anefa, ny zava-nisy tamin’ny taona 2016 no tsy nanara-dalàna satria avy hatrany dia ny Minisitra tamin’izany fotoana no nanendry ireo rehetra nandrafitra ny Vaomiera. Tamin’ity miseho ankehitriny ity, dia nanaraka izay voalazan’ny lalàna ny fananganana ny vaomiera, ka samy nandefa ny solontenany avy ny avy amin’ny Mpanao gazety zokiolona, ny tompona haino aman-jery, ny avy amin’ny Minisitera izay solontena iray monja, sy ny sisa hafa koa. Dikany, tsy mitombina mihitsy ny filazana fa tsy nanara-dalàna ny nananganana ny Vaomiera isasahana itambarana, izay efa lasa komity mpikarakara ny fifidianana amin’izao fotoana.
Miharo fankahalana manokana…
Ankoatra izay, iniana voizina hatrany ny hoe nataon’ny Minisitera 93 ireo mpikambana ao amin’ny Birao vaovaon’ny Holafitry ny mpanao gazety, mba hanilihana ny hafa tsy handray anjara amin’ny fifidianana. Mbola nohamafisin’ny Tale Jeneralin’ny Serasera, omaly, anefa fa tsy ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina mihitsy no nanao io fanovana io, fa ny teo anivon’ny Antenimierandoholona. Diso olona henjehina, noho izany, ireo mpanao gazety manakiana io fanovana io raha hanenjika ny Minisitera satria ny fahefana mpanao lalàna no nanova izany.
Nandritra ity adihevitra omaly ity no namakian’ny Tale Jeneralin’ny Serasera bantsilana ireo endrika fanehoan-kevitra ataon’ny mpanao gazety sasany ankehitriny, izay mitady hifangaro fankahalana manokana sy resaka politika. Hany ka na inona na inona fandaminana entin’ny mpikarakara ny fifidianana dia lavina sy tsy hankatoavina satria ilay tsangan’olona mihitsy no efa hananana olana. Rehefa henoina ny fanehoan-kevitra mandeha ankehitriny dia efa mivaona amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety. Eny, fa na hatramin’ireo samy ao anatin’ilay voalaza fa « Cellule de crise » aza dia efa misy mitaraina sahady ny amin’ny hoe « Soavalian’ny Mpanao Politika » ny hetsiky ny mpanao gazety. Izany no manambara fa efa miharo fankahalana manokana sy kajikajy politika ny hetsika fanoherana ny fifidianana ny biraon’ny OJM ataon’ny mpanao gazety sasantsasany ankehitriny.
SAVOROVORO TAO TOLIARA: Olona mpanararaotra no nanao ny fandrobana
MPIASAN’NY FAHASALAMANA : Mahazo fiofanana momba ny « humanisation des soins »
FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA : Voafidy avokoa ireo mpikambana enina, andrasana ireo telo tendren’ny Filoha
ANTENIMIERAMPIRENENA : Hiroso amin’ny « Dématérialisation »-n’ny asam-baomiera
GOVERNEMANTA: Mitohy ny asa fanavaozana na dia ankatoky ny faran’ny taona aza